My iPhone USB Dị Ọkụ! Ogwe USB Nwere Ike Ca Nweta Mmebi? - Iphone
akaebe nke alụmdi na nwunye eweghachiri mgbe ịkwa iko
enweghị SIM iphone 5 fix
Enweghị ike imelite ozi ịkwụ ụgwọ
otu esi emechi ibe na iphone
My iPhone USB Dị Ọkụ! Nwere Ike Ọkụ Na-ekpo ọkụ Nwere Ike Imebi?
Chei! Gị iPhone USB na-ekpo ọkụ na-emetụ. Kedu ihe ị na-eme? Nwere a na-ekpo ọkụ iPhone USB emebi gị iPhone? Kedu ihe na-eme n'ime iPhone gị mgbe eriri USB na-amalite ikpo oke ọkụ? N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe kpatara ezi ụdọ ọkụ ọkụ na-aga n'ihu na-agbagha akụkọ ifo banyere ihe nwere ike ime mgbe eriri iPhone gị na-ekpo ọkụ.
kedu ihe kpatara na agaghị m ehichapụ foto na iphone m
Nke a blog post sitere n'ike mmụọ nsọ site na okwu nke Uwais Vawda bipụtara na isiokwu m akpọ 'Gịnị Mere My iPhone Batrị Nwụ Ngwa Ngwa?' . Ajuju ya bu nke a:
“Ahụla m vidiyo na nso nso a na-egosi ihe ise kachasị elu nwere ike igbu iPhone gị ma ha kwue na ọ bụrụ na eriri gị na-akwụ ụgwọ nwere obere bọl na nso njedebe ọ nwere ike imerụ ekwentị gị. Were bụ ọkachamara na Apple. You nwere ike ịma ma nke a ọ bụ eziokwu? ” (dezie)
Mgbe Ezi iPhone Gịnị na-aga Bad
Ahụrụ m eriri na ọnọdụ niile dịka onye ọrụ Apple. Anyị na-eji eriri anyị iPhone n'ụdị gburugburu niile. Umu nkita ohuru, umuaka, ihu igwe, na plethora nke ihe ndi ozo na ihe ndi ozo n’eduba na udiri ahihia. Ọ bụghị mgbe niile ka onye ọzọ mejọrọ - mgbe ụfọdụ, ọ bụ naanị eriri, dị mma, gbajie.
N'etiti ụdị mmebi niile m hụrụ, nke kachasịkarị bụ eriri nwere nsogbu n'akụkụ njedebe nke jikọtara iPhone gị. Ahụrụ m ọtụtụ eriri dị ka Uwais kọwara na ajụjụ ya, nwere ntopute na njedebe.
otu esi edozi iphone anaghị chaja
Gini mere eji eme ka eriri igwe na-achapu mgbe ha di oku?
Bulging na njedebe nke a àmụmà cable a na-mere site a obere circuit n'ime roba ụlọ na njedebe nke USB na-ejikọ gị iPhone. N'ihi mkpụmkpụ, eriri na-ekpo ọkụ ọkụ dị n'ime, plastik gbara obere mkpụkọ ahụ, na plastik na-ekpo ọkụ na-akpata ntopute na njedebe nke eriri.
Nwere ike A Frayed Ma ọ bụ Bulging iPhone USB Imerụ My iPhone?
Na nkenke (gbaghara pun ahụ doro anya), mba - belụsọ otu ọnọdụ m ga-atụle n’oge. Ọ bụ naanị n'oge na-adịghị ahụkebe eriri USB nwere ike imebi iPhone. Nke ahụ bụ n'ihi na ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị na-akwụsi ike na ihe niile ma mmebi mmiri, na mgbe eriri ahụ na-apụ, ọ na-eme n'ime eriri ahụ, ewepụrụ ya na iPhone n'onwe ya.
A Short? Enweghi ike ime nke a iPhone?
Mgbe ndị mmadụ nụrụ 'mkpụmkpụ', ọ dị mfe iche n'echiche nnukwu ọkụ eletrik zapping gị logic board na ihe niile na-aga anwụrụ ọkụ. Ọ bụrụ na etinyere iPhone gị kpọmkwem na mgbidi ahụ, nke a nwere ike ịbụ ihe ga - ekwe omume - mana ọ bụghị.
Cheta na eriri ike na-abanye na iPhone anaghị achịkwa eriri, mana site na nkwụnye ọkụ ọkụ 5 volt jikọtara ya na mgbidi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ USB na kọmputa gị (kwa 5V). Eriri ahụ nwere ike belata ihe niile ọ chọrọ, mana ọ gaghị ekwe omume ya ịnyefe ụgwọ ọ bụla nwere ike 'zap' iPhone gị.
Enweghị ike iweghachi iphone njehie 10
Kedu ihe dị iche na iwu ahụ?
E nwere otu isịneke ebe ihe iPhone USB cable nwere ike imebi gị iPhone, ma ọ nwere ihe ọ bụla na-eme na USB. Ndị ahịa na-ewetara m iPhones mgbe ụfọdụ ihe ịrịba ama nke na-ere ọkụ na na gburugburu ọdụ ụgbọ mmiri ha. Na bụla ikpe, ileba anya na nyocha gosipụtara corrosion n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Ewezụga bụ nke a: Ọ bụrụ na iPhone gị bụ mmiri mebiri emebi, mgbe ahụ ọ bụla USB cable, nkwarụ ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ, nwere ike imebi gị iPhone. Nke ahụ bụ n'ihi na mkpụmkpụ ugbu a adịghị na eriri ọkụ ọkụ, mana n'ime iPhone n'onwe ya. Mgbe n'ime iPhone overheats, ọ na-akpata mmebi nke batrị, na chemical mmeghachi omume na-ewe ebe mgbe ihe iPhone batrị overheats nwere ike niile ma na-agbawa agbawa.
Dị ka akụkụ, ụlọ Apple niile nwere ọgụgụ isi nwere obere igbe dị n'ime ha - ọ bụrụ na batrị iPhone ma ọ bụ Mac na-ekpo oke ọkụ, tụba ya n'ime igbe ahụ wee mechie ụzọ! (N’oge m niile na Apple, agatụghị m eme nke a).
Gịnị bụ ikpe ahụ? Nwere ike A Emebi USB n'ezie mebiri My iPhone?
Ahụtụbeghị m ya. Mgbe ihe iPhone cable na-ekpo oke ọkụ, ọ na-eme nke ahụ n'ime eriri ahụ, tere aka na iPhone iji mee ka mmebi ọ bụla. Naanị otu, dị ka anyị tụlere, bụ mgbe ọkụ ọkụ na-ekpo oke ọkụ n'ime gị iPhone, nke ikpe ọ bụ n'ezie bụghị USB kpatara ya nile, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ nwere ike gosi ịbụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ iPhone gị na-ekpo ọkụ, ọ nwere ike ịbụ okwu ọzọ kpamkpam. Lelee edemede m, 'Gịnị Mere My iPhone Ji Enwe ọkụ?' ịmụtakwu ihe.
Aghọtaghị m: Agaghị m ekwu na ndị nwere eriri nwere nkwarụ ga-aga n’ihu na-eme ha oge ebighi ebi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ igwe eletrik dị ukwuu maka ihe na-erughị ọkara ụgwọ nke Apple, lelee ndị a AmazonBasics àmụmà Gịnị . Would gaghị achọ ka eriri ahụ kpuchie ọkụ ma gbaa gị ọkụ ma ọ bụ ihe ọzọ. Ma mmebi gị iPhone? Echeghị m.
iphone 6 nwere nsogbu na oku
Ihe kacha mma na ekele maka ịgụ,